स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा नियमित त्रुटि, सर्वसाधारणमा थप त्रास | Sagarmatha TV
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा नियमित त्रुटि, सर्वसाधारणमा थप त्रास
काठमाडौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दा नियमित जसो त्रुटि गर्ने गरेको छ ।
मन्त्रालयले संक्रमीतको दैनिक विवरण सार्वजनीक गर्दा विशेषगरि संक्रमितको जिल्ला, वडा लगायतका स्थानका बारेमा दिने जानकारी गलत हुने गरेको छ ।
संक्रमीतको बसोबास रहेको स्थानको भन्दा, नागरिकतामा उल्लेख भएको स्थानलाई सार्वजनीक गरिदा आम सर्वसाधारणमा अन्यौलतका साथै त्रास पनि बढन गएको पाइन्छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनीक गर्ने सुचनाका कारण आम सर्वसाधारणमा त्रास बढेको छ नै कन्ट्याक ट्रेसिङमा संलग्न अधिकारीलाई अफ्ठ्यारो परेको छ ।
मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता समिरकुमार अधिकारीको हस्ताक्षरसहित शुक्रबार बिहान ९ बजे सार्वजनिक भएको विज्ञप्तिमा गोडैता नगरपालिकाको ८, ९, ११, १३ र १४ नम्बर वडा र रामनगर बहुअर्वा गाउँपालिका–७ निवासी २२, २२, २४, २५, २५, २७, ३२, ३४, ३४, ३५, ३८, ३८, ३८र ४९ वर्षका र १८ वर्षीय महिला संक्रमित रहेको विवरण सार्वजनीक गर्यो ।
यो सूचना सार्वजनिक हुनेवित्तिकै सर्लाहीको रामनगरमा १५ संक्रमित भेटिएको हल्ला फैलियो । यसरी मन्त्रालयले सुचना सार्वजनीक गर्दा गाँउमा त्रास सिर्जना भएको रामनगर–७ का वडाध्यक्ष रामसोगारथ तेलीले बताए । वडाध्यक्ष तेलीका अनुसार जम्मा परीक्षण भएको संख्या नै ११ जना थियो । ती सबै वडा नं. ४ को तपस्वी जगदेव माविको क्वारेन्टाइनमा राखिएका थिए । ‘परीक्षणभन्दा बढी संक्रमितको आएर बुझ्दा हाम्रो वडामा एक जना मात्र संक्रमित भएको पायौं’, उनले भने संक्रमित व्यक्ति ४ जेठमा भारतको बम्बईबाट आएका थिए ।
मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता अधिकारीले अन्य संक्रमित गोडैता नगरपालिकाको भएको बताए । त्यसो त मन्त्रालयले गाउँपालिको नाम समेत ठीक लेखेको छैन । सर्लाहीको रामनगर बहुअर्वा गाउँपालिका अहिले अस्तित्वमै छैन । अहिले भएको रामनगर गाउँपालिका हो र बहुअर्वा साबिकको गाविसको नाम हो ।
विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले गोडैता नगरपालिकाको वडा पनि थपिदिएको छ । कार्यकारी अधिकृत विकाउकुमार यादवका अनुसार नगरपालिकामा जम्मा १२ वटा वडा छ । तर, मन्त्रायलले विज्ञप्तिमा १३ र १४ नं. वडामा पनि संक्रमित भेटेको उल्लेख गरेको छ ।
यादवका अनुसार संक्रमितमध्ये १३ जनाको पत्तो लागिसकेको छ । यद्यपि, अर्का एकजनाको पहिचान भइसकेको छैन । भेटिएका संक्रमतिमध्ये अधिकांश दिल्ली, मुम्बई, गुजरात लगायतका क्षेत्रबाट आएका छन् । उनीहरु सबै क्वारेन्टाइनमा राखिएका थिए ।
मन्त्रालयले यसअघि पनि कोरोना संक्रमितको सूचना प्रवाहमा लापरबाही गर्दै आएको छ ।
यसअघि धादिङका भनिएका संक्रमित काठमाडौंको बागबजारको प्रेसमा काम गर्ने व्यक्ति भएको खुलेको थियो ।
दाङमा संक्रमण भेटिएको भनेर सार्वजनिक गर्दा पनि संक्रमित व्यक्ति नक्सालमा रहेको पाइएको थियो भने सिन्धुलीका संक्रमित पनि काठमाडौंमै रहेको खुलेको थियो ।
स्थायी र अस्थायी ठेगानाबारे स्पष्ट रुपमा नहेरी सार्वजनिक गर्दा यस्तो त्रुटि भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, वडा नै कसरी थपियो भन्ने विषयमा मन्त्रालयले केही बताएको छैन । बरु आगामी दिनमा थप संवेदनशील बन्ने जनाएको छ ।
मंगलबार राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि संक्रमित व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्दा संक्रमण हुँदाको स्थान सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आदेश दिइसकेको छ ।
मन्त्रालयले गर्ने यस्ता त्रुटिका कारण सर्वसाधारणमा संक्रमणको थप त्रास बढेको देखिन्छ नै भएका त्रुटिलाई समयमै सच्याउने तर्फ मन्त्रालयको ध्यान नजादा कोरोना संक्रमितको विवरण सार्वजनिक गर्ने जस्तो कुरामा पनि मन्त्रालय संवेदनशील बन्न नसकेको हो की भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।